INDLELA YOKUSEBENZISA ISIKALIMALI NGENDLELA EFANELEKILEYO
Nje ukuba yenzeke kum loo nto, ukuba kwiklasi yokuzoba yobugcisa, andazi Indlela yokusebenzisa isikali 1:50, kwaye andikwazi ukwenza umsebenzi wam ngokufanelekileyo; Ukuthintela oku ekubeni kwenzeke kuwe, nantsi into esiza kuyichaza ngayo yonke into ekufuneka uyazi malunga nesikali kunye nokusetyenziswa kwayo.
1 Indlela yokusebenzisa isikali?
1.1 Yintoni umlinganisi?
1.2 Iindidi zesikali seemitha
1.3 Isilinganisi-manzi sisetyenziswa njani?
2 Izikali zesikali
Indlela yokusebenzisa isikali?
Ngaphambi kokuchaza indlela yokusebenzisa isikali, kufuneka sazi ukuba esi sixhobo sihlala sisetyenziswa ngabayili bezakhiwo, ukuzoba iingcali, abenzi beemaphu kunye nezinye iingcali.
Isikali ngumlawuli nje okwimo kanxantathu okanye iphiramidi, kuba inamacala amathathu ahlukeneyo, anezikali ezahlukeneyo; Esi sixhobo sisetyenziselwa ukulinganisa umlinganiso ekuboniswe ngawo into, imilo okanye nayiphi na into kwindiza yokwenyani; Ngamanye amagama, isetyenziselwa ukulinganisa isikali sayo ngokwenyani.
Ngale ndlela, esikwaziyo njengezinyuko okanye isikali sokwakha; Kuya kuvela ukuba ngumlawuli okhethekileyo onobume be-prismatic, enika ithuba lokuba izikali ezahlukileyo zibandakanywe kwisixhobo esinye. Ndiyabulela koku, kunokwenzeka ukuba abayili, abafundi kunye naye nabani na ozinikeleyo kwezobugcisa, angenza imilinganiselo ngokulula.
Esi sixhobo sinenjongo ephambili yokuququzelela umzobo wezithuba, ukuba ukuba sizibona ngenqwelomoya, akunakubanjwa ephepheni; Inamanqanaba amathathu ahlukeneyo, isikali sendalo (1: 1), isikali sokwandisa (x: 1), kunye nesikali sokunciphisa (1: x).
Kwaye kuba sithetha ngesixhobo sokulinganisa; Apha siza kukushiya eli nqaku lihle malunga iiyunithi zomlinganiseloSiyathemba kwaye inomdla.
Iindidi zesikali seemitha
Sele inyathelo elinye kude ekuchazeni Indlela yokusebenzisa isikali, kodwa kuqala, sifuna ukuthetha kancinci malunga neendidi ezikhoyo; Ukuba kuyinyani, kwinkcazo edlulileyo sathi esi sixhobo sinesimo sephiramidi, kuba ezi zixhaphakile; kodwa, kukho ezinye iintetho, masibone:
Iiplanethi: Esi sixhobo sikwimo yomlawuli oqhelekileyo, kwaye sinokufunyanwa sinezikali ezimbini okanye ezine; Oko kukuthi, ezinye zinesikali esinye kuphela kwicala ngalinye kunye nezinye, izikali ezibini zobuso ngasinye.
Unxantathu okanye i-prismatic: njengoko besesitshilo, ezi zinemilo yephiramidi, kwaye zinamacala amabini kwicala ngalinye; Oko kukuthi, banezikali ezi-6 xa zizonke. Kulolu hlobo lwesikali, kuqhelekile ukuba izikali zidlule; umzekelo, isikali se-1: 20 sihambelana ne-1: 200.
Icandelo lesikwere: njengoko igama lisitsho, ezi zizikwere kwaye zinamaqondo ahlukeneyo angama-8.
Umlandeli: la manyathelo asetyenziswa kakhulu ngabayili bezakhiwo; ukusukela enkosi kwinyani yokuba banemithetho eyahlukeneyo enezikali ezahlukileyo, ziya kuthi zibe zezona zigqibeleleyo.
Isilinganisi-manzi sisetyenziswa njani?
Ngoku ewe, lifikile ixesha lokuchaza Indlela yokusebenzisa isikali 1:20 nezinye izikali. Ngokwenyani, isikali kulula kakhulu ukusisebenzisa; Into yokuqala ekufuneka siyenzile kukulinganisa ubungakanani bento enomdla kuthi, usebenzisa irula; Siza kuthatha imilinganiselo yesiseko, amacala kunye nezinye iindawo eziyimfuneko, kuxhomekeke kwinto leyo.
Eli nyathelo liya kusinceda ukuba sazi ukuba yintoni na into eyinqaba yento kwinqanaba layo lendalo, ukugcina imilinganiselo kunye nobukhulu bokwenyani. Ke, ukuba into esiyifunayo kukusebenzisa isikali sokukhulisa, siza kufaka u "x" kwifomula "x: 1"; Ngale ndlela, ukuba siyayandisa iphindwe kabini, ifomula iya kuba ngu "2: 1"; Siza kwenza oku kuxhomekeke kubungakanani esifuna ukukwandisa.
Kwelinye icala, ukuba oku kufunwayo kukwenza isilinganiselo sokunciphisa, endaweni yoko kuya kwenziwa kwakhona kwifomula, kuphela oku kuya kuba ngu "1: x"; ke, ukuba siyaqhubeka nomzekelo onikwe apha ngasentla, endaweni yawo bekuya kuba ngu "1: 2", kwaye umzobo ubuphinda kabini ubuncinci kunowokuqala.
Kulapha apho iziphumo eziyinyani zokusebenzisa isikali zinokubonwa, kuxhomekeke kwinqanaba esilifunayo; Ngale ndlela, kunokwenzeka ukufeza umlinganiso wokuzoba kunye nokuyivelisa kwizikali ezahlukeneyo; ezikwizixhobo zethu. Ukufumana isikali esichanekileyo kulula njengokujika isikali malunga ne-axis yayo ye-longitudinal.
Njengoko sibona, injongo yesikali ijika ibe: kukusebenza njengesixhobo sabo bantu bafuna ukwenza imilinganiselo yemizobo enezikali ezahlukeneyo; njengoko kuchaziwe apha ngasentla. Eyona ixhaphakileyo kukuba isetyenziswa kwimeko yesikolo; kodwa inyani kukuba isikali sisixhobo esisisiseko kubafundi nakwabo benza ubugcisa okanye uyilo.
Xa inkcazo yento inikwa isikali, izikali ezintathu ezikhoyo zazikhankanywa ngokufutshane; masiqwalasele ngakumbi kubo:
Isikali sokwenyani: njengoko besesitshilo, le nto imelwe luphawu "1: 1"; Kule meko, imizobo inikezelwa ngesikali sokwenyani sento.
Isikali sokunciphisa: apha, umzobo uya kuba "x" isixa samaxesha amancinci kunento eyiyo ngokwenyani; ngenxa yoku, uphawu ngu "1: x", ukusukela "u" x linani lamaxesha into leyo inciphile ngayo.
Isikali sokukhulisa: eli lityala elichaseneyo, kuba imizobo iya kuba mikhulu kuneyona nto iyiyo; ke, kuphawu "x: 1", u "x" ubhekisa kwinani lamaxesha into ekuphakanyiswa ngayo.
Kwisikali 1: 100, isentimitha enye kumzobo iya kulingana nemitha ngokwenyani; Eli nqanaba lisetyenziswa ikakhulu xa kusenziwa izicwangciso zokwakha.
Ngokumalunga nezikali ze-1: 50 kunye ne-1: 75, isentimitha enye ilingana no-0.5 okanye 0.75 yeemitha zobunyani, njengoko kunokuba njalo.
Isikali sokunciphisa esingu-1: 20 silingana nesentimitha enye kwinqwelomoya, kunye ne-20 cm ngokwenyani; oku kusetyenziswa ikakhulu xa kufikwa kwiinkcukacha zokufaka.
Siyathemba ukuba ngoku uyakwazi ukusebenzisa isikali ngendlela eyiyo; Kodwa, ukuba kukho naliphi na inqaku elingakhange licace kuwe kwaye ufuna umzekelo obonakalayo, nantsi siza kukushiya ividiyo apho ichazwe khona Indlela yokusebenzisa isikali.